နေ့စဉ်သောက် သားဆက်ခြားဆေးသောက်တော့မလား? ဒါတွေသိထား! | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန်	: နေ့စဉ်သောက် သားဆက်ခြားဆေးသောက်တော့မလား? ဒါတွေသိထား!
အတူနေချစ်သူရည်းစား ဒါမှမဟုတ် အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ လိင်ကိစ္စပုံမှန်ရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘဝမှာ အရေးကြီးဆုံးကိစ္စထဲက တစ်ခုကတော့ အချိန်မတိုင်ခင်မှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ရမသွားဖို့ပါပဲ။ သားဆက်ခြားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပက်သက်လာရင် ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
နေ့စဉ်သောက်ဆေးတွေမှာဆိုရင် ဟော်မုန်းတစ်မျိုးတည်းပါ နဲ့ ဟော်မုန်း နှစ်မျိုးပါသားဆက်ခြားသောက်ဆေး ဆိုပြီး အမျိုးအစား (၂) မျိုးရှိပါတယ်။ Lydia ရဲ့ Rosa နဲ့ Fine လိုမျိုး ဟော်မုန်းနှစ်မျိုးပါ သားဆက်ခြားသောက်ဆေးမှာတော့ အီစတိုဂျင် နဲ့ ပရိုဂျက်စတင် ဆိုတဲ့ ‌ဟော်မုန်းနှစ်မျိုးပါပြီး Lydia ရဲ့ Lacta လိုမျိုး ဟော်မုန်းတစ်မျိုးတည်းပါ သားဆက်ခြားသောက်ဆေးမှာတော့ ပရိုဂျက်စတင် ဟော်မုန်းတစ်မျိုးတည်းသာပါပါတယ်။
အမျိုးအစား (၂) မျိုးထဲက ဘယ်ဟာကိုသောက်သောက်၊ နေ့စဉ်သောက်ဆေးသောက်တဲ့ နည်းလမ်းကို ရွေးတော့မယ်ဆိုရင် မသောက်ခင် အောက်က အချက် (၄) ချက်ကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။
(၁) ထိရောက်ချင်လား? အချိန်မှန်မှန်သောက်ပါ…
နေ့စဉ်သောက်ဆေးက ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းထိ ကိုယ်ဝန်တားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ စစ်တမ်းတွေရဲ့အဆိုအရ ဆေးသောက်ချိန်မမှန်တဲ့သူတွေ၊ မေ့ပြီး ရက်ခြားသောက်မိတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးအများစုအတွက်တော့ ဆေးသောက်နေရက်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ရသွားတဲ့ ၁ရာခိုင်နှုန်းထက် ပိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုယ်ဝန်ကို ထိထိရောက်ရောက်တားချင်ရင်တော့ မင်းအနေနဲ့ နေ့စဉ်သောက်ဆေးကို တူညီတဲ့အချိန်မှာပဲ နေ့တိုင်းသတိတရနဲ့ မှန်မှန်သောက်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
(၂) ရာသီလာရက် နဲ့ စိတ်ခံစားမှု အပြောင်းအလဲ
ဒါကတော့ သောက်ဆေးစစသောက်တဲ့အချိန် တစ်လလောက်မှာ ရာသီလာရက် နောက်ကျတာတွေ၊ ရာသီစက်ဝန်းပုံမမှန် ဖြစ်တာမျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သောက်တာသက်တမ်းကြာသွားရင် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်လို့ စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ ပုံမှန်ဆေးသောက်သုံးမှုရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်းတော့ မဆိုလိုပေမယ့် တချို့ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ တခါတလေမှာ စိတ်အတက်အကျလွယ်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
(၃) ဝက်ခြံပြဿနာတွေ ကင်းသွားမယ်…
သားဆက်ခြားပေးတာအပြင် ဝက်ခြံနဲ့ အရေပြားပြဿနာရှိတဲ့ တချို့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင် နေ့စဉ်သောက်ဆေးမှန်မှန်သောက်တာနဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု ရောက်လာတဲ့အခါ ဝက်ခြံတွေလျော့သွားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နေ့စဉ်သားဆက်ခြားသောက်ဆေးတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) ကောင်းကျိုး နဲ့ ဆိုးကျိုး
ကောင်းကျိုးအနေနဲ့ကတော့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ PCOS (Polycystic Ovary Syndrome) လို့ခေါ်တဲ့ မျိုးဉအိမ်မှာ အရည်အိတ်တည်တဲ့ရောဂါကို သားဆက်ခြားသောက်ဆေးတွေက ကုစားပေးနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ ရာသီနှစ်ရှည်လများ မမှန်တာ၊ အမွှေးအမျှင်တွေ များလာတာ နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် အတက်အကျမြန်တာမျိုးတွေပါ။ ဒီရောဂါကိုတော့ Lydia ရဲ့ Clair လိုမျိုး နေ့စဉ်သောက်ဆေးကို မှန်မှန်သောက်မယ်ဆိုရင် ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။
ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ကတော့ နေ့စဉ်သောက်ဆေးမှာ ပါတဲ့ ဟော်မုန်းကြောင့် ဗိုက်နာ၊ ဗိုက်အောင့် နဲ့ ရင်ဘတ်အောင့်တာမျိုးတွေ၊ ခေါင်းကိုက်ပြီး အိပ်ငိုက်တာမျိုးတွေ ရှိနိုင်ပေမယ့် ဒီလို အသေးအဖွဲ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုတော့ သင့်ဆရာဝန်က လွယ်လွယ်ကူကူဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။